Zingaphi iimitha okanye iisentimitha ezikwiyadi enye kude? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Zingaphi iimitha okanye iisentimitha kwi1?
Kwiyadi enye 0.914 iimitha okanye I-91.4 iisentimitha. Umzekelo, kufuneka sifumanise ukuba zingaphi iimitha kwiiyadi ezili-1000, siphindaphinde iiyadi ezili-1000 nge-0.914 kwaye sifumane iimitha ezili-914. Ukufumanisa ukuba zingaphi iisentimitha kwiiyadi ezili-1000, siphindaphindeka ezili-1000 nge-91.4 kwaye sifumane i-91400 cm.
I-yard yunithi lomgama osetyenziswa kwinkqubo yokulinganisa yaseBritane naseMelika.
Iyadi enye ilingana ne-1 cm okanye iyadi enye ilingana neemitha ezi-91,44.
Iyadi enye = 1 cm
Njengoko ndixele ukuphindaphinda, oko kukuthi, yaphendula imibuzo efanayo, saba nemidlalo kwimathematics. Le midlalo yacwangciswa ngutitshala. Usiqeqeshe ngala manani. Ndibakhumbula ebomini.
Kwiyadi enye, ziisentimitha eziyi-91.44, oko kukuthi, ziimitha ezi-0.9.
Iiyadi zilinganisa umgama. Le ayisiyo kuphela umlinganiso wesiNgesi, kodwa kunye nomda waseMelika wobude. Ngamaxesha ohlukeneyo, iyadi enye yayinobukhulu obahlukileyo. Iyadi yanamhlanje ngokubopha imitha.
Iyadi enye ilingana ne 91,44 iisentimitha. Ukuba ilinganiswe ngemitha, emva koko Iyadi enye ilingana ne 0,9144 iimitha.
I-Yard, isiNgesi-yadi, yiyunithi yomgama osetyenziswa kwiGreat Britain nakwi-United States yaseMelika. Kwiiyunithi zala maxesha, iyadi ye-metric ithathwa ilingana neenyawo ezintathu zemitha, okanye i-intshi ezingama-36. Oku kuhambelana neemitha ezili-0,9144. I-Yard, njengeyunithi yemilinganiselo, ayifakwanga kwi-SI.
iyadi - inkqubo yangaphakathi yamanyathelo amkelwe ngexesha elinye e-UK. kamva yasasazeka eUnited States. Iyadi enye ziimitha ezi-1. Ewe kunjalo, kwizangqa zesayensi, umlinganiso kwiiyadi awusasetyenziswa, kodwa abantu abaqhele ukuzisebenzisa bayayisebenzisa ngexesha lokulinganisa kwemihla ngemihla.
Ke, ukuze ube nombono wokuba yeyiphi i-1 eyardiyali, kufuneka uqale wazi ukuba yavela njani, kwaye ngokweedatha zembali kukho iinguqulelo ezintathu ubuncinci zokubonakala kwayo, omnye wabo uthi le yadi ngumgama ukusuka kwincam yeempumlo Yobukhosi bakhe, inkosi I-England ukuya kwincam yeempumlo yomnwe wakhe ophakathi, xa ingalo yandiswa ukuya kwicala. Kodwa ngokutshintsha kweenkosi, ubude beyadi nabo butshintshe ngokufanelekileyo. Uhlobo lwesibini kukujikeleza kobuso bakhe, kodwa wayesele eguqukile ngesantya esikhulu. Okwesithathu ubude bubude benkemba kwakhona.
Ke wonke umntu udiniwe yile nto ndiyithathileyo nguKumkani uHenry. Ewe, kwaye siyalelwe ukuba senze iwayit emgangathweni ukusuka kwi-beech eqhelekileyo, ngokwenza njalo sigunyaziswe ubude, obuthi ngexesha lethu bulingane no:
Kwindlela, iiyadi yahlulahlulwe yangamanye amaxabiso
e / 2 - kwisiqingatha seyadi;
na / 4 - isithuba;
kwi / 8 - umnwe;
kwi / 16-isikhonkwane.
Yintoni eyona nto indikhokelela kuhlobo lwenyani lokuqala lwemvelaphi ...
Iyadi nganye ziimitha ezi-0,9144. Kwinkqubo yokulinganisa yaseRussia, iiwadi ziyasetyenziswa. Ngokwesiqhelo lo mgangatho wobude unokufumaneka eNgilane nakumazwe akwiNtla Melika. Kuya kuvela ukuba iiyadi nganye ziisentimitha eziyi-91.44.
Kuboniswa kwidayari yomzi mveliso ukuba:
Iyadi enye = iinyawo ezi-1 = i-intshi ezingama-3 = 36 mm , ukusukela kwi-1 cm = 10 mm, emva koko
iyajika ithi lonto Iyadi enye = 1 cm
Kufuneka kwakhona kutshiwo ukuba iyunithi esetyenziswa eMelika nase-UK.
UGoogle kunye neYandex ukukunceda.
Zingaphi iimitha eyadini?
Chwetheza kuGoogle okanye kwiYandex:
Iyadi enye kwiimitha
Iyadi enye = 1 yeemitha
Ukulunga kukuba ungangena naliphi na inani, umzekelo:
I-354,3 yeeyadi kwiimitha
354,3 yeeyadi = 323,972 yeemitha
Imibuzo ye-27 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,445.